“Tsy handeferana…”, hoy ny Seg: zandary miray tendro amin’ny dahalo | NewsMada
Efa betsaka ihany ny mahatsikaritra, saingy mazava izao fa misy tokoa ny zandary miray tsikombakomba sy tendro amin’ny dahalo. Nohamarinin’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny Jly Randriamanarina Jean Christophe, izany, omaly. Nampitandrina ity farany fa “tsy handeferana na oviana na oviana izany”.
“Toy ny zava-nitranga tany Ambositra, hita tao anatin’ny telefaonina finday nampiasain’ireo dahalo maty voatifitry ny zandary ny hafatra nifampiresahan’ny zandary iray sy ireo dahalo. Efa naiditra am-ponja io zandary niray tendro amin’ny dahalo io”, hoy ny fanazavan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Randriamanarina Jean Christophe, nandritra ny lanonana fifampiarahabana noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2019, raha nampitandrina ireo zandary eo ambany fifehezany amin’ny fanaovana fitondrantena tsy mendrika eo am-panatanterahana ny asa. Nampitandrina ireo zandary izy ary nilaza fa tsy handefitra amin’izany. Niaraha-nahita ny zava-nitranga tamin’ny fahaverezana bala marobe tao amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena ao Ambositra. Ireo bala very ihany anefa no tonga eny am-pelatanan’ny dahalo ka amonoan’izy ireo ny namantsika. Koa ahoana ny handeferana amin’izany?, araka ny filazany hatrany. Nambarany fa misy zandary manamboninahitra, manamboninahitra lefitra efa migadra hatramin’ny dimy taona mihitsy aza ny sasany noho ny firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo. “Tsikaritray fa maivana ny sazy homen’ny fitsarana ireo zandary manao fandikan-dalàna ka tsy afa-po izahay ka tokony hojeren’ny fitsarana akaiky ny momba izany”, hoy izy.
Nanamafy izany koa ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa, ary nilaza fa tsy handefitra amin’ireo zandary manana fitondrantena tsy mendrika. “Miala tsiny fa tsy ny hadalanareo no hanaratsy endrika ny zandarimaria izay efa tsara”, hoy izy. Nambaran’ireto manamboninahitra ambony eo anivon’ny fibaikoana ny zandarimariam-pirenena ireto hatrany fa vina napetraky ny zandarimariam-pirenena ny hoe “zandarimaria madio”. Madio amin’ny fomba fiasa hidiana amin’ny kolikoly ary hotohizana hatrany ny famongorana ny kolikoly, atao vaindohan-draharaha ny fanajana ny zon’olombelona sy ny fomba fiasa hiverenan’ny fahatokisan’ireo vahoaka amin’ny zandarimaria. Madio koa ny toeram-piasana sy ny vavahady lehibe fidirana ao amin’ny toby misy ny foibem-pibaikoana. “Inoana fa miely patrana any amin’ny sampana faran’izay madinika izao ezaka izao satria miainga avy aty ambony hatrany ny ohatra”, hoy izy.